For MIET post graduate students ...: ၅) အဆင့် (၅) Defense နေ့တွင်လိုအပ်သောစာရွတ်စာတမ်းများ Совет သို့တင်ခြင်း
၅) အဆင့် (၅) Defense နေ့တွင်လိုအပ်သောစာရွတ်စာတမ်းများ Совет သို့တင်ခြင်း
Автореферат ဖြန့်အပြီး Defense မတိုင်ခင်အတွင်း Совет သို့ပေးရမယ့်စာရွတ်စာတမ်းတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးစုပြီးမှပေးစရာမလိုပါဘူး။ ပြီးရင်ပြီးသလောက် секретарь диссертационных советов ဖြစ်တဲ့ Нина Г.М. ကိုပေးရမှာပါ။
၁) Председатель диссертационного совета အတွက်အပေါ်စာ (၁ စောင်)
၂) Ученный секретарь диссертационного совета အတွက် အပေါ်စာ (၁ စောင်)
၃) Список научных трудов (၁ စောင်)
၄) Заключение диссертационного совета (Совет တွင်ရှိသော member အရေတွက်အတိုင်း)
၅) Отзыв များ
၆) Список замечания отзывов (၁ စောင်)
ရ) Баллотировочный Бюллетень (Совет တွင်ရှိသော member အရေတွက်အတိုင်း)
၈) Поветска дня (Совет တွင်ရှိသော member အရေတွက်အတိုင်း)
နမူနာပုံစံအား ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ автореферат ရဲ့ရှေ့ဆုံးနှစ်မျက်နှာကအချက်လက်တွေ တခုခြင်းယူ ပြီးအစားထိုးယုံပါပဲ။
နမူနာပုံစံအား ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ личный список, справка для экзамена နဲ့ автореферат က အချက်လက်တချို့ကိုယူပြီးအစားထိုးယုံပါပဲ။
နမူနာပုံစံအား ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ရေးပြီးပါက မိမိ Совет ရဲ့ ученный секретарь လက်မှတ်ယူရမှာပါ။ ပြီးရင်တော့ секретарь диссертационных советов ဖြစ်တဲ့ Нина Г.М. ကိုပေးလို့ရပါပြီ။
နမူနာပုံစံအား ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Совет တွင်ရှိသော member တိုင်းမှသေချာစစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် အတတ်နိုင်ဆုံးအမှားနည်းအောင် မိမိ руководитель နဲ့အတူရေးရမှာပါ။ Нина Г.М. သို့မပေးခင် တစုံကို Совет ရဲ့ ученный секретарь အားအရင်ပြရမှာပါ။ သူကျေနပ်တဲ့အထိပြင်ပြီးရင်တော့ Совет တွင်ရှိသော member အရေတွက်အတိုင်း ထုတ်လို့ရပါပြီ။ ပိုပြီးအမှားနဲအောင် Совет ရဲ့ ученный секретарь အားမပြခင် မိမိဌာနရဲ့ ученный секретарь ကိုအရင်ပြပြီးသူကျေနပ်တဲ့အထိပြင်ရမှာပါ။ နောက်ဆုံး Совет ရဲ့ ученный секретарь မှစစ်ပြီးရင်တော့ မိမိ Совет တွင်ရှိသော member အရေတွက်အတိုင်း ထုတ်ပြီးပေးလို့ရပါပြီ။
ပုံမှန်အားဖြင့် Отзыв နှစ်စုံဆီလက်ခံရရှိမှာဖြစ်ပြီး တစ်စုံကို ရရင်ရသလောက် Нина Г.М. ကိုပေးထားရမှာပါ။ Отзыв လက်ခံရရှိမူစောတာ၊ အချိန်လင့်တာပေါ်မူတည်ပြီး Defense နေ့မနက်အထိပေးလို့ရပါတယ်။
နမူနာပုံစံအား ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Отзыв လက်ခံရရှိမူစောတာ၊ အချိန်လင့်တာပေါ်မူတည်ပြီး Defense နေ့မနက်အထိပေးလို့ရပါတယ်။
နမူနာပုံစံအား ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ရွတ်ထဲမှာသုံးပိုင်းပါတဲ့အတွက် Совет တွင်ရှိသော member အရေတွက်အတိုင်း အပိုင်းအရေတွက်ရအောင်ထုတ်ရမှာပါ။ Нина Г.М. ပေးပါကဖြတ်ပြီးသားအပိုင်းလိုက်ပေး ရမှာပါ။
နမူနာပုံစံအား ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ နှစ်ယောက် (သို့) သုံးယောက် တစ်ရက်ထဲတွင် Defense လုပ်ရပါ က ထိုနေ့အတွက် Поветска дня အား အားလုံးလုပ်စရာမလိုပဲတစ်ယောက်လုပ်ရင်ရပါပြီ။ တစ်ရွတ်ထဲမှာသုံး ပိုင်းပါတဲ့အတွက် Совет တွင်ရှိသော member အရေတွက်အတိုင်း အပိုင်းအရေတွက်ရအောင်ထုတ်ရမှာပါ။ Нина Г.М. ပေးပါကဖြတ်ပြီးသားအပိုင်းလိုက်ပေး ရမှာပါ။
Defense နေ့မှာလိုမယ့် Slide တို့၊ Doklad တို့ ကတော့မိမိစိတ်ကြိုက်လုပ်နိုင်တဲ့အတွက် အသေးစိတ်မရေးပေး တော့ပါဘူး။ နမူနာပုံစံတွေကိုတော့အောက်မှာအစဉ်လိုက်ပေးထားပါတယ်။
၁) Презентация (Совет တွင်ရှိသော member အရေတွက်အတိုင်း print ထုတ်ရမှာပါ။)
၂) Речь слайдов
၃) Ответ на отзывы
၄) Ответ на отзыв первого оппонента
၅) Ответ на отзыв второго оппонента
ု၆) Заключительное слово
အဆင့် (၄) Совет အဖွဲ့မှလက်ခံပြီးနောက် Автореферат ...
Оппонент များအတွက်အပေါ်စာနှင့် договор နမူနာပုံစံမျ...
MIET ဆိုဒ်သို့ပို့ရန် နမူနာ Word file များ
၅) အဆင့် (၅) Defense နေ့တွင်လိုအပ်သောစာရွတ်စာတမ်းမ...
Председатель диссертационного совета အတွက်အပေါ်စာ
Ученный секретарь диссертационного совета အတွက် အေ...
Список замечания отзывов
Презентация, Речь, Ответы на отзывы, Заключительно...